ukufaka i-Hawaii Photoreal Vol 1 + Vol 2 + I-3 FSX & P3D
umbuzo ukufaka i-Hawaii Photoreal Vol 1 + Vol 2 + I-3 FSX & P3D
1 ngenyanga 1 kwiveki edlulileyo #1414 by axegau
Isicelo sokunceda ukufaka iHawaii Photoreal Vol 1 + Vol 2 + Vol 3 FSX & P3D
Okokuqala ndingathanda ukubulela uRIKOOO kunye nabo bonke abaphuculisi kakhulu kwi-Add Ons ezithakazelisayo kwi-simulator ye-flight P3Dv4.
Emva kokuba sele ndisebenzisa ezinye iindiza, ndandifuna ukukhuphela i-Hawaii Photoreal ngeli xesha. Kodwa andizange ndifike kwi-installation!
Emva kokukhuphela ifayile nge "Jumbo" kunye neeyure ezininzi, ndabona ukuba ifayile ye-zip kunye ne-5,77 GB (i-6.200.281.837 Bytes) ayikwazanga ukukhutshwa
→ "Ifayili yefayile ayiphumelelanga. I-archive ingakonakaliswa, ingafundwanga, okanye ifomati engahambelaniyo".
Ndaphinda ndikhuphe i-download - ngempumelelo efanayo!
Andizi into endiyenze ngayo kwaye ndicela uncedo kunye nokuxolisa kwiNgesi yam engalunganga!
Ngomusa ukhangele iAxel
iintsuku 1 ngenyanga 4 eyadlulayo #1415 by rikoooo
Namhlanje ndikukhuphela indawo kwaye ndakwazi ukuyivula kwaye ndifake ngaphandle kwengxaki. Ndicinga ukuba kufuneka uzame ukukhupha i-archive kwisistimu yokungaqhelekanga esuka kwi-Windows okanye uzame ukulungisa xa usebenzisa iWindows okanye nayiphi na isofthiwe.
Ndiyabulela kunye nokuhlaliswa okuvuyisayo
iintsuku 1 ngenyanga 4 eyadlulayo #1416 by axegau
Ndiyabulela kakhulu inqaku elihle! Yayiyiphutha lam; Ndasebenzisa inkqubo yokugcina indawo (NCH Expresszip) ecacileyo ayikwazanga ukudibanisa le ngqolowa enkulu. I-WinRAR yasebenza kakuhle.
Kwakhona ukufakwa kwi-P3D v4 isebenze - emangalisayo !!!
Ndiyabulela kwakhona kwaye uphumelele ngakumbi!